1 Horumarka waxbarashada iyo kaalinta afka hooyo Abukar Yusuf Warsame Shirka macallimiinta, Stockholm Oktober 24, ppt download
Published byLilly Gentles Modified over 4 years ago
Presentation on theme: "1 Horumarka waxbarashada iyo kaalinta afka hooyo Abukar Yusuf Warsame Shirka macallimiinta, Stockholm Oktober 24, 2009."— Presentation transcript:
1 1 Horumarka waxbarashada iyo kaalinta afka hooyo Abukar Yusuf Warsame abukar60@netscape.net Shirka macallimiinta, Stockholm Oktober 24, 2009
2 2 Qodobbada aan ka hadli doono: Hordhac: Maxaa igu dhaliyey inaan mawduucan ka hadlo? Heerka aqoonta ee ardada aan waddankaan ku dhalan ama waalidkood uusan ku dhalan. Sida afka hooyo u saameeyo luqadda ardadu wax ku barto siiba: Sababaha baahida afka hooyo keentay Noocyada luqadda labaad looga taageero ardeyda aan waddankan u dhalan (non-native). Doodda ku saabsan luqadda kowaad waxtarkeeda. Maxaa loo aaneyn karaa dib u dhaca ubadakeenna iney waxbarashada jaamacadaha sii wataan ? Talo soo jeedin iyo gunaanad
4 4 Fikirka isku xirnaanta (interdependence hypothesis) oo sheegaya in ardeygu uu horumar ka gaari karo luqadiisa labaad haddii uu horey ugu fiicnaa luqadda kowaad (afka hooyo) L1L2 Waxbarasho tayo leh iyo ubadka oo isku kalsoonaada
5 5 Maxay tahay sababaha loo hirgeliyey waxbarashada luqadda kowaad ee afka hooyo (L1)? 1.In ay xoojiso sidii ardyagu uusan u dhumin dhaqankiisa iyo asalka uu ka soo jeedo. 2.Iney u oggolaato in ubadka uu si caadi ah uga hana qaado dhinaca luqadda waxbarshada iyo korista xagga caqliga iyo maskaxdaba. Source: SOU 1974 report and “home language reform, 1977”; Monica Axelsson “Mother tangue teaching and programs for bilingual children in Sweden”
6 6 1.In ubadkii habka waxbarsahada lagu sii dhex daayo (immersion). 2.In ubadkii habka waxbarsahada lagu sii dhex daayo isla markaasna waqtiyo cayiman laga caawiyo luqadda labaad ee wax lagu barto (immersion with systematic language support). 3.In ubadkii la diyaariyo inta aan waxbarsahada lagu sii dhex deyn (Immersion with preparotry phase). 4. In ubadkii marka hore luqaddiisa kowaad wax lagu baro oo si tartiib-tartiib ah uu ugu gudbo luqadda labaad ee uu wax ku barto (transitional bilingual). 5.In ubadkii wax badan wax lagu baro afkooda hooyo (L1) ka dibna aad loo hagaajiyo aqoontiisa luqadda labaad (maintenance bilingual). 5 nooc oo luqadda looga caawiyo ubadka (Christensen and Stanat, 2007)
7 7 Hardanka L1 iyo L2? 1.Xagga waxbarashada: ardaygii wuxuu uga faa’ideysan karaa aqoontii uu horey ugu kasbaday L1 markii uu L2 wax ku baranayo. Macalimiinta L1 oo ciyaara door wax ku ool ah oo u dhaxeeya iskuulka iyo waalidiinta ubadka soo galootiga ah. Kolleyba haddii ubadkii aysan waddankaan meelna uga socon maxaa waqti looga dhuminayaa barashada L1. Luqadaha kowaad oo aad uga duwan kuwa labaad. 2.Xagga dareenka bulsho iyo doorka kalsoonida qof ahaaneed. 3.Xagga xiriirka kala dhexeeya bulshada uu ubadku ka soo jeedo.
8 8 Aasaaska reerka (family background) oo kala duwan xag dhaqan, diin iyo dhaqaale. Dhibaato xagga dhex-galka oo ay la kulmaan ubadka siiba xagga waxbarashada iyo shaqooyinka. Habka ay waddanka ku soo galeen waalidkood– mid la soo casuumay sida kuwa shaqo ahaan ku yimid ama mid iskiis isu keenay oo qaxooti ahaan ku yimid. Dhiirigelin la’aan xagga waalidka ah iyo bulshada ay ka tirsan yihiin ubadku. Sababaha loo aaneyn karo faraqa waxbarasho ee u dhexeeya ubadka waddanka martida loo yahay iyo ubadka soo galootiga ama waalidkood soo galootiga yihiin:
9 9 Talo soo jeedin iyo gunaanad: In la xoojiyo macallimiinta maadooyinka sayniska iyo xisaabta oo aqoon u leh iney af-soomaali wax ku baraan. In isku xir loo sameeyo aradeyda fara ku tiriska ah ee ka qalin jabiyey jaamacadaha iyo ku dhawaan dhammaynaya dugsiga sare si ay ula wadaagaan faa’iidada waxbarashada jaamacadda. In la sameeyo tiro koob iyo daba gal horumarka waxbarasho iyo mid shaqo ee ubadkeenna. Inta aysan arrintu gaarin “Icraabtu ama naxwahu ma dammun ayay dhiigga ka beddeleysaa” ha lagu dadaalo in barashada afka hooyo ay wax ka tarto horumarka guud ee waxbarsho ee ubadkeenna.
10 10 Waad mahadsan tihiin!!!
Download ppt "1 Horumarka waxbarashada iyo kaalinta afka hooyo Abukar Yusuf Warsame Shirka macallimiinta, Stockholm Oktober 24, 2009."
Speaking 2 languages: additional skills or additional needs? How migrant children of minority language backgrounds experience the transmission of their.